သင့်အတွက် မေးခွန်းနှင့် အဖြေများ
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော မေးခွန်းများကို နှိပ်၍ လိုအပ်သော အဖြေများကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
၁။ မဖြစ်မနေစုငွေ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
မြန်မာနိုင်ငံအသေးစားငွေရေးကြေးရေးဥပဒေသတ်မှတ်ချက်အရ မိမိ၏ချေးငွေအပေါ် ၅% ထက်မပိုသောထားရှိရမည့်စုငွေကိုခေါ်ပါသည်။
၂။ မည်သည့်အကြောင်းအရာကြောင့် Customer များထံမှမဖြစ်မနေစုငွေကိုလက်ခံပါသနည်း?
Customer များငွေစုသည့်အလေ့အထဖြစ်ထွန်းလာစေရန် နှင့် Customer များ၏ လူနေမှုဘဝကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ မဖြစ်မနေစုငွေ ပမာဏအတွက် အတိုးနှုန်းမှာမည်မျှနည်း?
မြန်မာနိုင်ငံအသေးစားငွေရေးကြေးရေးဥပဒေသတ်မှတ်ချက်အရ တစ်နှစ်လျှင် ၁၄% ဖြင့်တွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဤနေရာတွင် click နှိပ်ပါ။
၄။ Customer များအနေဖြင့်မိမိချေးငွေအတွက် မဖြစ်မနေစုငွေမည်မျှစုဆောင်းရမည်နည်း။
Customer များအနေဖြင့်မိမိချေးငွေအတွက် မဖြစ်မနေစုငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်ကိုစုဆောင်းရပါမည်။
၅။ AEON မှ မည်သည့်အချိန်ကာလထိ customer များ၏ စုဆောင်းငွေကို လက်ခံထားရှိမည်နည်း?
Customer များရွေးချယ်ထားသော ချေးငွေကာလ၏နောက်ဆုံးအကြိမ်အထိ စုဆောင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ Customer များအနေဖြင့် နောက်ဆုံးပေးသွင်းရမည့်အကြိမ်တွင် စုငွေကိုမည်သို့ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်မည်နည်း?
Aeon အနေဖြင့် Customer များနောက်ဆုံးပေးရမည့် ငွေပမာဏမှ စုငွေကိုခုနှိမ်ပေးပါမည်။
၁။ AEON ကိုမည်သို့ ဆက်သွယ် နိုင်ပါသလဲ?
အီရွန် ၏ Customer Service Hotline ဖြစ်သော ၀၉ ၉၆၉ ၇၁၂ ၁၁၁ မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
၂။ AEON Customer Service Hotline ကို မည်သည့်အချိန်ထိ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသလဲ?
အီရွန် Customer Service Hotline ကို နေ့စဉ် နံနက်၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀နာရီအထိ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။ အီရွန် ဝန်ဆောင်မှု အတွက် အတိုးနှုန်းဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ဥပဒေအရ နှစ်စဉ်အမှန်ထိရောက် အတိုးနှုန်းကို ၂၈%ထက် မပိုသော အတိုးနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ပါသည်။ အတိုးနှုန်းအား အသေးစိတ် တွက်ချက်နိုင်ရန် ဤနေရာတွင် click နှိပ်ပါ။
၂။ အတိုးနှုန်းအပြင် တစ်ခြားဝန်ဆောင်ခပေးရန်ရှိပါသလား။
ချေးငွေလျှောက်ထား သူမှ ဝန်ဆောင်ခကို ချေးငွေပမာဏပေါ်မူတည်၍ လျှောက်လွှာ လျှောက်ထားရာ နေရာတွင် ပေးသွင်းရမည်။ အကယ်၍ ချေးငွေလျှောက်လွှာ အတည်ပြုချက် မရခဲ့လျှင် ထိုဝန်ဆောင်ခမှာပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။ အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဤနေရာတွင် click နှိပ်ပါ။
၃။ မော်တော်ဆိုင်ကယ် လျှောက်ထားမှုအတွက် အတိုးနှုန်းအပြင် တစ်ခြားဝန်ဆောင်ခပေးရန်ရှိပါသလား?
ချေးငွေလျှောက်ထား သူမှ ဝန်ဆောင်ခကို ချေးငွေပမာဏပေါ်မူတည်၍ လျှောက်လွှာ လျှောက်ထားရာ နေရာတွင် ပေးသွင်းရမည်။ အကယ်၍ ချေးငွေလျှောက်လွှာ အတည်ပြုချက် မရခဲ့လျှင် ထိုဝန်ဆောင်ခမှာ ပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။ အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဤနေရာတွင် clickနှိပ်ပါ။
AEON S-Loan Scheme ကို ဘယ်လိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလဲ။
AEON S-Loan Scheme အား လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အတူ အီရွန်၏ ချေးငွေလျှောက်ထားရာ နေရာများမှ တဆင့် လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလို ပါက ဤ နေရာတွင် click နှိပ်ပါ။
အီရွန် S-Loan ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ရန်အတွက် ပါဝင်သူ ဘယ်နှစ်ဦး လိုအပ်ပါသလဲ?
အီရွန် S-Loan ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ရန်အတွက် ပါဝင်သူများမှာ လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်နှင့် အာမခံပေးသူ စုစုပေါင်း၂ဦး လိုအပ်ပါသည်။
၃။ အီရွန် S-Loan ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားမှုအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။
အီရွန် S-Loan ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားရန်အတွက် လျှောက်ထားသူနှင့် အာမခံသူမှာ အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူ အသက်၆၀နှစ်အောက်များဖြစ်ရမည်။ အခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် နှင့်ပတ်သက် ၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဤ နေရာ တွင် click နှိပ်ပါ။
၄။ AEON's S-Loan ဝန်ဆောင်မှုအား ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အီရွန်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ လျှောက်ထားခွင့်မရှိသေးပါ။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များအတွက် AEON နှင့် အတူပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားသော သင်တန်းများတွင် S-Loan (Education) အစီအစဉ်ဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိရန်အတွက်click နှိပ်ပါ။
၅။ အီရွန် S-Loan ရယူနိုင်ရန်အတွက် ချေးငွေလျှောက်ထားရာနေရာများတွင် ပစ္စည်းအမျိုးအစားမည်မျှ လျှောက်ထားနိုင်ပါသလဲ?
အီရွန် S-Loan ရယူရန် Customer မှ အီရွန်၏ ချေးငွေလျှောက်ထားရာ နေရာမှတဆင့် မတူညီသော ပစ္စည်းအမျိုးအစား ၂ခုကို တစ်ပြိုင်တည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၆။ ချေးငွေလျှောက်လွှာလက်ခံရာဌာနမှ လျှောက်ထားသော လျှောက်လွှာအားလုံးကိုအတည်ပြုချက်ပေးပါသလား။
လျှောက်လွှာတိုင်း အတွက် အတည်ပြုချက်မပေးပါ။ အီရွန်မှ သတ်မှတ်ထား သောစည်းမျဉ်းများ နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသော လျှောက်လွှာများ အတွက်သာ အတည်ပြုချက် ပေးပါသည်။
၇။ လျှောက်ထားသူမှ မိမိ၏လျှောက်လွှာ အတည်ပြုချက်ကျ မကျကို မည်သို့သိရှိနိုင်ပါနည်း?
အီရွန်မှ ချေးငွေလျှောက်လွှာ အတွက်အခြေအနေကို လျှောက်ထားသူ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းသို့ မက်ဆေ့ပို့ပြီး အကြောင်းကြား ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက csinfo@aeoncredit.com.mm သို့ မေးလ် ပို့၍ သော်လည်းကောင်း ၀၉ ၉၆၉ ၇၁၂ ၁၁၁ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၈။ လျှောက်ထားသူသည် အီရွန် မှချပေးသော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုအတွက် မည်သို့အသုံးပြုထုတ်ယူရပါမည်နည်း။
လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် မှတ်ပုံတင်မူရင်း နှင့်အတူ မိုဘိုင်းမှ မက်ဆေ့ကိုပြ၍ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရ ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၉။ လျှောက်ထားသူသည် အီရွန် မှချပေးသော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို မည်သည့်အချိန်တွင်ထုတ်ယူနိုင်ပါနည်း?
လျှောက်ထားသူသည် အီရွန်မှ ချပေးသော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို ၁၅ရက်အတွင်း ထုတ်ယူအသုံးယူနိုင်ပါသည်။
၁၀။ အီရွန်မှ အတည်ပြုကြောင်းမက်ဆေ့ဒ် မရရှိခြင်းဖြစ်စေ မိုဘိုင်းမှပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်စေ မှားယွင်းဖျက်မိခြင်းဖြစ်စေ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း?
အီရွန်မှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မက်ဆေ့ဒ်မရရှိပါက Customer Service Hotline ဖြစ်သော ၀၉ ၉၆၉ ၇၁၂ ၁၁၁ သို့ဆက်သွယ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင် အ သေးစိတ် စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁။ အီရွန်ချေးငွေလျှောက်ထားရာနေရာ ဆိုတာဘာလဲ? တည်နေရာ?
အီရွန် S-Loan Scheme နှင့် ပက်သက်ပြီး customer များ၏ ချေးငွေလျှောက်လွှာတင်မှု ကိစ္စများအား AEON နှင့် အတူပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းမှာ AEON application points ဖြစ်ပြီး လိပ်စာများအား အသေးစိတ် သိရှိလို ပါက ဤ နေရာတွင် click နှိပ်ပါ။
၁။ အီရွန် S-Loan လျှောက်ထားရန် မည်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလဲ?
အီရွန် S-Loan လျှောက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဤနေရာကို click နိပ်ပါ။
၁။ ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုကာလ နှင့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုကာလ နှင့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဤနေရာ တွင် click နှိပ်ပါ။
၁။ ရန်ကုန်တွင် မည်သည့်နေရာများတွင် လစဉ်ပြန်လည် ပေးဆပ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသလဲ?
အီရွန်သို့ ချေးငွေပြန်လည်ပေးသွင်းနိုင်သော နေရာများမှာ ကမ္ဘောဇဘဏ်, ဧရာဝတီဘဏ်, ယူနိုက်တက်အမရာဘဏ်, AGDဘဏ်, မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်, True money, Ongo, Wave Money နှင့် Near Me ဆိုင်များမှတဆင့် လစဉ်ပြန်လည် ပေးဆပ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဘဏ်တည်နေရာများနှင့် ချေးငွေပေးသွင်းနိုင်ပုံ အချက်လက်များအား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက, ဤနေရာ တွင် click နှိပ်ပါ။
၂။ မန္တလေးမြို့တွင် မည်သည့်နေရာများတွင် လစဉ်ပြန်လည် ပေးဆပ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသလဲ?
အီရွန်သို့ ချေးငွေပြန်လည်ပေးသွင်းနိုင်သော နေရာများမှာ AGDဘဏ်, မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်များ, True money, Ongo, Wave Money နှင့် Near Me ဆိုင်များမှတဆင့် လစဉ်ပြန်လည် ပေးဆပ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဘဏ်တည်နေရာများနှင့် ချေးငွေပေးသွင်းနိုင်ပုံ အချက်လက်များအား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက, ဤနေရာ တွင်click နှိပ်ပါ။
၃။ Mobile banking စနစ်ဖြင့် ချေးငွေ ပြန်လည်ပေးသွင်းနိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့။ KBZ Pay, CB Pay, ကမ္ဘောဇ mobile banking, CB mobile banking, ဧရာဝတီ mobile banking နှင့် ကမ္ဘောဇ, ဧရာဝတီ, ယူနိုက်တက် အမရာ အင်တာနက်banking များမှတဆင့် ချေးငွေ ပြန်လည်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် Ongo mobile app, Wave Money mobile app နှင့် 2C2P (Near Me) mobile app ဖြင့်လည်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
၄။ Customer သည် အတွက် အခြားသူတစ်ဦးဦးမှ ကိုယ်စားပေးသွင်းလို့ရပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့။ အခြားသူတစ်ဦးဦးမှ ကိုယ်စားပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ သို့ပေမဲ့ ကိုယ်စားပေးသွင်းသူသည် ဘဏ်အား အမှန်တကယ်ငွေပေးသွင်းရမည့်သူ၏ အချက်အလက်များကို တိကျစွာပြောပြပေးဖို့လိုပါသည်။
၅။ ဘဏ်မှာငွေပေးသွင်းစဉ် Customer ၏အချက်အလက်မှားယွင်းစွာဖြည့်စွက်ခဲ့မိပါက မည်သို့ပြုမူဆောင်ရွက်သင့်သနည်း?
Customer မှ အီရွန် Customer Hotline ၀၉ ၉၆၉ ၇၁၂ ၁၁၁ သို့ဆက်သွယ်ပြီး မှားယွင်းပေးသွင်းမှုအတွက် အကြောင်းကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့မှသာ ငွေပေးသွင်းမှုအတွက် မှန်ကန်သော အချက်အလက်များဖြင့် အီရွန်မှ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။